Semalt: Nahoana no zava-dehibe ny votoatin'ny tranonkala sy ny teny fanalahidy?
Tranonkala iray izay tsy manana ny votoaty havanana, ary tsy voaomana tsara, dia tsy hahazo fifamoivoizana, midika izany fa tsy hanampy ny fikambanana hahatonga ny fiantraikany eo amin'ny aterineto izany.Tsy ho afa-miala amin'ny fitaovam-pikarohana ihany koa izy noho ny tsy fisian'ny votoaty manan-danja. Ny teny sy ny votoaty dia manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fanatsarana ny laharan'ny tranonkalanao.
Ivan Konovalov avy amin'ny Semalt niady hevitra ambany noho ny antony, ny fikambanana dia tokony hahafantatra ny votoaty sy ny teny fanalahidy
1 - minnesota long term care insurance. Fampahalalana ny mpanjifa mety
Adidin'ny orinasa rehetra ny mampianatra ny mpanjifany amin'ny vokatra na serivisiny. Azonao atao ny manosika vokatra ho an'ny mpividy ary manantena azy ireo hikasika sy hividy fotsiny. Na tamin'ny andro taloha aza, rehefa sarotra ny fampahalalam-baovao, ny orinasa dia niasa tamin'ny fanabeazana ny vahoaka talohan'ny nivarotana ny vokatra.
Noho izany antony izany dia tokony hanana ny votoaty tsara momba ny vokatrao ho an'ireo mpividy ianao. Ankoatra izany, ny mpividy dia mitaky fampahalalana bebe kokoa momba ny indostria sy ny tsena amin'ny ankapobeny mba handraisana fanapahan-kevitra mahalala. Ny tranonkala izay mametraka izany rehetra izany dia azo antoka ny hisambotra ny vahoaka.
2. Ho tonga teboka ambony ianao raha mbola mitohy ny fampahalalam-baovao
Ny olona dia mitoky amin'ny tranonkala iray, na dia olona iray amin'izany aza, izay mampiseho fa azo atokisana izy ireo hahafantatra izay lazainy. Raha hitan'ny mpiserasera amin'ny Internet ho toy ny loharanom-baovao ny tranonkalanao dia hitombo hatrany ny olona ho avy. Arakaraka izay, ny olona dia hanana hevitra ankapobeny fa ny hany toerana ahafahan'izy ireo mahazo fanazavana momba ny vokatra tsara dia ny tranokalanao. Amin'ny famoahana ireo zava-misy ireo eo amin'ny sehatry ny famolavolana tranonkala, ianao dia manana fahafahana lehibe hikolokolo ny tsena amin'ny lafiny anao.
3. Mitondra môtô môtô
Ny tranonkala rehetra dia noforonina miaraka amin'ny fahitana na ny hevitra hahazoana azy eo an-tampon'ireo pejin'ny motera fikarohana. Miaraka amin'ny votoaty havanana sy mametraka ny teny fanalahidy any amin'ny toerana mety, ny tranokalanao dia maneho vintana lehibe ho hitan'ny olona maro. Ny antony lehibe indrindra dia satria ny fitaovam-pikarohana dia hamantatra azy ao amin'ny pejy fikarohana.
4. Ny tranokalanao dia hahazo rohy kokoa
Fantatrao hoe inona ny rohy fananganana, fa mety mila mahafantatra ianao fa tena zava-dehibe amin'ny tranokalanao izany. Ireo tranonkala manana fampahalalam-baovao sarobidy sy teny fanalahidy tsara, tranonkala sy bilaogy maro no te-hiverina hiverina hiaraka aminy. Amin'izany fomba izany, ny tranonkala toy izany dia mahazo tsindry bebe kokoa noho izay tsy manana tanjona avo lenta.